Short.io: Calaamadda Cad ee URL Gaabiyaha | Martech Zone
Short.io: A Short Lab URL Shortener
Khamiis, May 7, 2020 Wednesday, May 6, 2020 Douglas Karr
In muddo ah, ayaa la iiga qoray adeeg si loo soo gaabiyo URL-yadayda, laakiin kharashka nidaamku aad buu qaali u ahaa. Isticmaalka subdomain-kayga gaarka ah ayaa ku kacaya qiimo aad u badan qaabkooda qiimaynta. Xaqiiqdii, wax badan ayaan ka bixin jiray koontadooda URL gaabinaysa intii la igu soo oogi lahaa dhammaan meheradaha suuq-geynta.
Waxaan adeegsan lahaa nooc bilaash ah oo aan keydkeygu aan laga habeynin, laakiin II waxaan rabey dad weynaha inay aaminaan oo gartaan URL-ka aan qaybinayo… kiiskan go.martech.zone. Joojinta qaar ka mid ah URL-yada guud waxay calan cas u tahay shakhsiyaad badan oo amniga ka feejigan.
Kaliya waxay qaadatay daqiiqado in laga helo daraasiin qalab khadka tooska ah, iyo Short.io isla markiiba istaagay. Waxaan ku cadeyn karaa gaabiyaha subdomain-kayga - xitaa hoosta koontadooda bilaashka ah! Intaas oo kaliya maahan, waxay dhab ahaantii haystaan ​​qaab ay uga haajiraan gaabinta gabowday haddii aadan awoodin inaad dhoofiso oo aad soo dhoofsato xogtaada… sidoo kale wax kharash ah.
Short.io, waxaad kuheleyn kartaa firfircooni ahaan soosaarid ama waxaad kaliya kuheli kartaa lambar iyo isugeyn kudar ah. Oo, waad geli kartaa oo aad astaysto isugeynta sida aad ujeceshahay haddii aad jeclaan lahayd, sidoo kale.
Muuqaal muhiim ah sidoo kale waa raadinta Ololaha Google Analytics. Habka ugu wanaagsan ee loo adeegsado gaabinta URL waa in la yareeyo dhererka guud ee URL dheer halka aad sidoo kale ku dartay xarigga weydiintaada UTM. Iyadoo Short.io, tani waa qayb ka mid ah xulashooyinka ku jira URL-gaaga gaagaaban oo leh nadiif nadiif ah.
Ugu dambeyntii, Short.io sidoo kale waxay bixisaa a WordPress Plugin inaad si otomaatig ah u soo gaabiyo xiriiriyahaaga adoo adeegsanaya API-kooda. Muuqaal aad u fiican!
Tags: wax yardomain caadadiisu tahayAnalytics googlegoogle analytics ololaha raadinta urlgoogle Analytics raadinta urlgaaban.cmgaaban.iogaabingaabin urlhacalaamadda cad